Ra’iisul Wasaare Rooble “ Ma aqbaleyno in qalqal geliyo amniga dalka” | Banaadir Times
HomeUncategorisedRa’iisul Wasaare Rooble “ Ma aqbaleyno in qalqal geliyo amniga dalka”
Ra’iisul Wasaare Rooble “ Ma aqbaleyno in qalqal geliyo amniga dalka”
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roob le oo khudbad u jeediyay Xildhibaannada Golaha Shacabka ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka, Amniga iyo waxqabadka xukuumadiisa ee 100-ka Maalin ee la soo dhaafay.
Ra’iisul Wasaaraha oo ka hadlayay Arrimaha doorashooyinka ayaa sheegay in xukuumadiisa ay dadaal dheeraad ah u gashay sidii dalka uga dhici laheyd doorasho xor iyo xalaal ah oo la isku raacsan yahay.
Waxaa uu Ra’iisul Wasaaraha ka sheekeeyay shirarkii looga hadlayay arrimaha doorashooyinka ee ka dhacay meelo kamid ah dalka, waxaana uu cadeeyay in uu rajeynayo in la fuliyo heshiisyadii doorashooyinka la xiriiray ee la gaaray.
Dhinaca kale Ra’iisul Wasaare Rooble oo ka hadlayay Amniga waxaa uu sheegay in Xukuumadda ay dejisay qorsha amniga ee doorashooyinka lana diyaariyay Ciidamadii sugi lahaa, waxaana uu ka digay in dalka la geliyo qalqal dhanka amniga ah.
Ugu dambeyn Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa ugu baaqay Shacbaka Soomaaliyeed inay meel uga soo wada jeestaan sidii loola dagaalami lahaa cadowga Gudaha iyo kan dibadda, waxana uu soo qaatay maah maah ah ( QOF AAN KUU FURI DOONIN YUUSAN KUU XIRIN).
Previous articlePuntland oo sheegtay in la musuq maasuqay dhaqaalo loogu talo galay dad uu saameeyay Ayaxa
Next articleGuddoomiyaha Aqalka Sare oo ka hadlay shirkii uu iclaamiyay Farmaajo